Qaar ka mid ah musharixiinta xilka madaxweynaha oo dacwad ka gudbiyay C/laahi Fartaag – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Qaar ka mid ah musharixiinta xilka madaxweynaha oo dacwad ka gudbiyay C/laahi Fartaag
Waxaa habeenkii xalay xaflad si heer-sare loo soo agaasimay lagu qabtay Hoteelka SYL ee ku yaala magaalada Muqdisho, waxayna xafladaasi aheyd mid lagu taageerayay musharaxnimada Xasan Sheekh Maxamuud oo markale isku soo sharaxay xilka madaxweynaha Soomaaliya.
Xafladaasi ayaa la sheegayaa inay kasoo qeyb-galeen xildhibaano gaaraya illaa 190 xildhibaan, kuwaas oo qaarkood si aan ganbasho laheyn u sheegay inay taageersan yihiin musharaxnimada Xasan Sheekh Maxamuud ee doorashada xilka madaxweynaha Soomaaliya.
Xildhibanaadii ka qeyb-gashay xafladaasi ayaa waxaa ka mid ahaa C/laahi Sheekh Ismaaciil Fartaag iyo C/rashiid Maxamed Xidig, oo labaduba ahaa musharixiin dhawaan u kala tartamay xilalka guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya iyo ku-xigeenkiisa, balse ku fashilmay.
Labadaan xildhibaan ayaa haatan si aan ganbasho laheyn u taageeray musharaxnimada Xasan Sheekh Maxamuud oo markale isku soo taagay inuu u tartamo doorashada xilka madaxweynaha Soomaaliya ee 8-da bisha Febraayo dhici doonta.
C/laahi Sheekh Ismaaciil Fartaag oo haatan ka mid ah xildhibaanada Aqalka sare islamarkaana dhawaan loo magacaabay inuu ka mid yahay guddiga doorashada madaxweynaha ayaa xalay si cad aan ganbasho laheyn u sheegay inuu taageersan yahay Xasan Sheekh Maxamuud.
Guddiga doorashada madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxaa laga doonayaa inaysan marnaba ka qeyb qaadan ololaha doorashada ee musharixiinta doorashada ku tartameeysa, balse ay codkooda si qarsoodi ah u siin karaan oo kaliya qof allaale qofkii ay doonayaan.
Qaar ka mid ah musharixiinta u tartameeysa doorashada xilka madaxweynaha Soomaaliya ayaa durbadiiba warqad cabasho ah u kala diray guddoomiyaasha labada Aqal ee baarlamaanada federaalka Soomaaliya.
Musharixiintaasi ayaa dalbanaya in C/laahi Fartaag laga saaro guddiga doorashada madaxweynaha, maadaama uu galay ololaha musharaxa Xasan Sheekh Maxamuud, oo la sheegayo inuu u ballan-qaaday xilka wasiirka gaashaandhiga ee xukuumadda lasoo dhisi doonno.
Illaa iyo haatan lama oga sida ay guddoomiyaasha labada Aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya uga jawaabi doonaan cabashada ay haatan soo gudbiyeen qaar ka mid ah musharixiinta, taas oo ku saabsan in C/laahi Fartaag laga saaro guddiga doorashada madaxweynaha Soomaaliya.